Izinselelo Zokuhlukaniswa Kwezimakethe Namathuba | Martech Zone
Izinselelo Zokuhlukaniswa Kwezimakethe Namathuba
NgoMsombuluko, Disemba 14, 2015 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Amakhasimende alindele umuzwa owenziwe waba ngewakho futhi abathengisi babona ngokusobala ithuba lokuhlukaniswa kwamasheya nokwenza ngezifiso. Eqinisweni, izinhlelo zemidiya ezenziwe ngezifiso ziholele ekukhuleni kwezinga lokuphendula, ukwanda kokuthengisa kanye nemibono yomkhiqizo eqinile yabathengisi abangama-48%. Ama-imeyili enziwe aba ngewakho aqhuba izikhathi eziphindwe ka-6 izinga lokuphendula ngama-imeyili ejwayelekile kanye nesu lokuzenzela eliqinile kuzo zonke iziteshi kungaletha izikhathi ezi-5 kuye kwezi-8 i-ROI ekusetshenzisweni kokumaketha.
Yini ukuhlukaniswa kweMakethe
Ukwehlukaniswa inqubo yokuhlukanisa amakhasimende akho noma imakethe yakho ezoba ngamaqembu achaziwe anezinhlobo zabantu ezivamile, izidingo, izintshisekelo, okubalulekile, kanye / noma izici zesifunda. Ukwehlukaniswa kwenza abathengisi basebenzise amasu enziwe afanele futhi aqondiswe eqenjini ngalinye - okwandisa ukusebenza komkhankaso jikelele.
Njengoba abathengi abangama-86% bathi ukwenza ngezifiso kudlala indima ezinqumweni zabo zokuthenga, kungani abathengisi behluleka ukuthola ingxenye kanye nokwenza ngezifiso?
Ama-36% wabakhangisi abika ukuthi ukwenza imilayezo ngokwezifiso kuziteshi zonke kuyinselele.
Ama-85% wemikhiqizo athi amasu abo wokwehlukanisa # asekelwe ekuhlanganisweni okubanzi, okulula.
Ngaphansi kuka-10% wabathengisi bezinga eliphezulu bathi basebenza kakhulu ku- # humanization.
Ama-35% wabakhangisi be-B2C bathe ukwakha umbono owodwa wekhasimende ngalinye kuzo zonke iziteshi kwakuyinselele enkulu.
Kule infographic, Kahuna imininingwane yokuthi ukwahlukaniswa nokwenza ngezifiso akuyona into enhle kodwa kufanele, izinzuzo ezivela ekuhambeni okungaphezulu kokuhlukaniswa okulula ngokweqile, nokuthi yini ebambe abathengisi emuva.
Kahuna iyipulatifomu yokuxhumana ezenzekelayo esebenzisa idatha ecebile yesiteshi esidala futhi ithumele imiyalezo eyenziwe yaba ngezakho esikalini. Sebenzisa i-Push, i-imeyili, i-in-app, neziteshi zenhlalo ukuxhumana namakhasimende akho ukuthi angabandakanyeka nini futhi kuphi.
Tags: KahunaUkuhlukaniswa kwemaketheukwehlukaniswa kwezentengiselwanoukuzenzelaukwenza ngezifiso i-infographicukwahlukanisaukuhlukaniswa kwe-infographicukukhomba